Sonos weputara okwu ya nile di elu na Japan | Akụkọ akụrụngwa
Sonos weputara okwu ya niile di na Japan
Mgbe mbido dị nro na August na ndị na-ere ahịa Japanese BEAMS - nke gụnyere Sonos One, Sonos Beam na Play: 5 - taa na-ahụ mmalite nke Sonos dum maka ndị hụrụ egwu na Japan, nke abụọ kachasị egwu ahịa n'ụwa. Mụbawanye ọrụ Sonos iji kpalie ụwa ịge ntị nke ọma, egwu na ndị na-egwu ihe nkiri ga-enwezi nhọrọ, na-enwe nnukwu ohere ịtọlite ​​ihe nkiri ụlọ na mgbakwunye nke PlayBase na PlayBar, bass ndị akpọpụtara nke ọma na Sonos Sub na ikike ige ntị na nke ọ bụla ụlọ (ma ọ bụ ha niile).
Sonos kwusiri ike inye ihe ikpo okwu mepere emepe nke na-enye ndị ọrụ ọrụ gburugburu ụwa aka, ma ugbu a na Japan, ige ntị na ọdịnaya ọdịyo ha chọrọ site na ọrụ iyi egwu ha kachasị amasị ha. Nọgide na-emezu nkwa ahụ pụtara idozi nnukwu nsogbu ịma aka dị na teknụzụ, na-eweta ihe ọhụụ dị egwu na ikuku ikuku na ụlọ, yana iso ndị ụlọ ọrụ nwere otu uche nwee mmekọrịta chiri anya. Nsonaazụ bụ ihe ọdịiche dị egwu na ịgbasawanye nke ọdịyo nke na-adịwanye mma ma na-ada ụda karịa sọftụwia ngwanrọ ọ bụla.
Matthew Siegel, onye isi ọchụnta azụmahịa na Sonos na-ekwu, "N 'ụdị okwu okwu nwere ọgụgụ isi jupụtara na teknụzụ na ụda olu adịghị mma, Sonos na-agba mbọ ịdị iche" "Anyị kwenyere na anyị mepụtara sistemụ ụlọ ụlọ nwere ọgụgụ isi dị ukwuu, nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọdịnaya niile masịrị gị, otu ịchọrọ."
Onye Sonos ọhụrụ maka Japan, Seto Kazunobu ga-achịkwa mwepụta ahụ, gbadoro anya na ọ dịịrị ndị ahịa Japan mfe ịnụ ụtọ ụda dị ịtụnanya ma na-enye ha ike ige ntị n'ụzọ ha. Ngwa ngwa Sonos dị na Japan na Sonos.com, Beams, Tsutaya, Sanwa, HAY, na Amazon bido n’ọnwa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Sonos weputara okwu ya niile di na Japan
Etu esi mebe koodu QR